Ugu wanaagsan qalab 10 flash kabashada xogta drive
Maanta, dad badan isticmaalaan flash ah in uu kaydiyo xogta muhiimka ah. Flash drives waa mid ka mid ah warbaahinta kaydinta ugu doorbiday siiyo xaqiiqda ah in ay yihiin size jeebka, raagaya iyo fududahay in la isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waa ay fududahay in xogta khasaaraha ka flash ayaa in ka badan gaar ahaan marka xogta aan la xoojiyaa. Yididiiladda, marka aad ka flash ah khasaaro xogta aad sabab u formatting, tirtirka shil ah, ama virus, xogta sida wali waa la soo saari karaa. Waxaad u baahan yahay a flash drive qalab wanaagsan kabashada dib u soo ceshano xogta aad.
1. Macluumaadka Rescue PC 3.2
Data Rescue waa software ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada xogta. Software Tani waxaa kaliya ma loo isticmaalaa in lagu soo kabsado files lumay laakiin sidoo kale inuu ka soo kabsado, miisaskii oo xijaab, diiwaanka boot iyo qaabeynta weerar adag. Tani software kabashada xogta kaloo ka caawisaa in aad ogaato qalab la bixin kari farsamo halkan gargaar ah soo kabashada macluumaadka ka hor inta macluumaad dheeraad ah waxaa laga badiyay.
Data Rescue PC3 bixisaa user la feature disk-imaging ah halkan ka dhigi kartaa byte-by nuqul -byte ee cajaladaha asalka isla markiiba marka failure farsamo dhacdaa.
Tani software kabashada xogta ku eg tahay inay soo dhiciyaan files formatted.
Wondershare Data Recovery waa software awood leh xirfad qorshee loo isticmaalaa in lagu soo kabsado files lumay ka flash drive. Software waa mid dhakhso badan, ammaan iyo kabanayso dhammaan faylasha ka flash lumay ay sabab u tahay sababo kala duwan. Waxaa loo adeegsan karaa inuu ka soo kabsado dhufsanayaasha qaabab file iyo noocyada file ka mid yihiin videos, Cajalado, archives, email iyo sawiro.
Waxaad uma baahna xirfadaha wax farsamo si ay u shaqeeyaan software this. Si kastaba ha ahaatee, aad rabto in aad si aan u weyneyno aad xirfadaha kombiyuutarka waxaad isticmaali kartaa software ka Wizard soo kabashada hab.
ayaa version maxkamad lacag la'aan ah ayaa ka shaqeynayaan kooban.
Recuva waa software kabashada file ka xoogbadan, in dib u soo ceshano karo xogta aad laga badiyay. Waxaa intaa dheer, Recuva waxaa loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado sawirada, emails, waraaqaha, videos. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo software ma qayb ka mid ah oo idinku adag. Software ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay version la qaadan karo sidaas uma baahna rakibo.
Waa fududahay in la isticmaalo iyo leeyahay size download yar
Download page waa mid waxoogaa lagu dhakafaarayo
Data Recovery Falsan yahay freeware degdeg ah loo isticmaalo inuu ka soo kabsado Tifaftirayaasha files, Cajalado, videos, waraaqaha iyo sawiro. Software heerka natiijada scan ka dibna waxay muujinaysaa dhib ah ka raysashada. Waxay leedahay ikhtiyaar sare raadinta jidaynayey user si aad u ogaato macluumaadka la tirtiro si deg deg ah. Falsan Data Ladnaansho kale oo uu leeyahay version la qaadan karo, kaas oo kuu ogolaanaya in aad si aad u isticmaasho on your computer iyadoo aan loo baahan rakibo.
Taageerada luqadda badan
software soo kabanayso oo kaliya kuwa files waxa lagu ogaan karaa.
Pandora Recovery waa aalad kabashada xogta freeware loo isticmaalaa in lagu soo kabsado files si joogto ah la tirtiro ka flash drives. Qalab kabashada Tani waxay sidoo kale soo kabanayo Windows XP, xafidayaa, qarsoon, ama ka kooban files. Waxa kale oo la isticmaalo si ay ku eegaan, raadinta, caleenta iyo kabsado files tirtiray ka Muga baruurta iyo NTFS eegin noocyada faylka. Intaa waxaa dheer, software ka soo kaban karto, Cajalado, videos, waraaqaha iyo sawiro ka drives adag iyo kaararka xusuusta iyo recycle bin.
kabanayso tirtiray files laakiin weli ma overwritten
helay files tirtiray kaliya
iCare Data Recovery waxaa loo isticmaalaa inuu ka soo kabsado files iyo folder dhunsaday tirtirka ula kac ahayn, formatting ee drive flash ama drive kharribeen. Marka laga reebo flash drives, software bilaash ah waxaa loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado files ka drives adag iyo kaararka SD. Ma ku haboon yahay soo kabsaday sawir tan iyo markii ay ku kala garan kartaa oo innaba ma aan dib u soo ceshano. Software waxay leedahay hab fudud saaxir kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala aan xirfado ka hor qalabka kabashada xogta si ay u isticmaalaan si sahlan.
Qalabkani waxa uu taageeraa noocyada kala duwan file iyo nidaamyada files, kaararka xusuusta, kaararka SD, flash drives iyo drives adag dibadda.
Waxa aanu soo bandhigi tirakoobka horumarka inta ay socoto dib u soo kabashada. Taasi waa markii ugu tagey ama baaxadda faylasha loo aqoonsaday.
Undelete 360 ​​waa software ugu fiican ee soo kabsaday files badiyay tirtiray midkood si ula kac ah ama ula kac aheyn ka flash ah. Faylal ay sidoo kale laga badiyay ka bin ku recycle, computer, kaararka SD, camera digital iyo telefoonada smart sidoo kale si fudud loo soo kabsaday karo.
Waxay leedahay version ah tijaabo lacag la'aan ah, taas oo soo kabanayo dhammaan faylasha lumay si dhib la'aan.
Waxaa mararka qaarkood renames xarfaha hore ee files soo kabsaday oo yeeshay dhaqan qalaad samaynta aqoonsiga adag.
Easeus Data Recovery kaa caawinaysaa in aad dib u soo ceshano files lumay flash ay sabab u tahay tirtirka shil ah, drive kharribeen, iyo formatting ama qalad nidaamka. Waxaa damaanad kabashada ammaan ah oo dhamaystiran oo aad files lumay dhex socda saddex tallaabo oo fudud. Gaar ahaan, software-ka loo isticmaalaa in lagu soo kabsado lumay Cajalado, videos, emails, sawiro iyo dokumentiyo laga eryi USB, PC, laptop, camera digital iyo warbaahinta kale lagu kaydiyo.
xiridda barnaamijka waa si degdeg ah oo uu leeyahay interface saaxiibtinimo
Scanning faylasha lumay qaadataa waqti dheer oo ka badan software caadiga ah soo kabashada xogta. Tani software kabashada xogta waa qaali siisay qiimo dhan $ 80.
9 Tool Recovery File Active
Recovery File firfircoon u ogolaataa user ay u soo kaban xogta ka flash lumay ay sabab u tahay sababo kala duwan. Software waxay leedahay fursado cad iyo iskaanka shaqeynayaan si dhakhso ah oo sidaas daraaddeed software kaa caawin doona inaad dib u hesho xogta aad waqti. Software ka yar yahay horumarinta iyo muuqaalada ka badan ayaa lagu soo daray si loo hagaajiyo shaqeynta ee software-ka.
Waxay leedahay Superscan ah taas oo ka caawisa inay ka soo kabsadaan files in Quick scan ma soo kaban karin.
muuqaalada qaar waxa qarsoon sida in ay adag tahay in la helo. Inkastoo fursadaha iskaanka hore waa cad, hannaanka soo kabashada ma aha mid sahlan sidaas ku arbushi karaan.
Active Undelete Software waxaa loo isticmaalaa inuu ka soo kabsado tirtirto xogta ka disk flash iyo warbaahinta kale lagu kaydiyo. Qalabkani waxa uu soo kabashada soo kaban karto xogta iyada oo la isticmaalayo qaab gaar ah specification- saxeexyada. Software ayaa sidoo kale taageertaa dhufsanayaasha saxiixyada file iyo noocyada file. Sii sifooyinka soo kabashada wax ku ool ah, waxa ay dib u soo kabashada ee files waa u fududahay la Active Undelete Data Recovery.
software uu ka soo kabsanayo tirtiray files fudayd.
software waa qaali.
Marka la eego farsamada iyo diiddo dhinacyada, Wondershare kabashada Data waxay muujinaysaa sida hoggaamineed ee qalabka kabashada xogta kor ku qoran. Qaar ka mid ah qalabka soo kabashada ayaa weli la sameeyey laakiin Wondershare Data Recovery ayaa helay taageero ka mid ah dadka isticmaala electronic. Waxay qaadan doontaa waqti aan software kale haleesho la. Mar kasta oo aad u baahan tahay software awood leh oo wax ku ool ah, Wondershare DTA Recovery waa ikhtiyaarka ugu fiican. Waxaa Fiiri maanta.
> Resource > Top List > ugu wanaagsan ee 10 Tools Flash Drive Recovery